စစ်တွေ မှာ ကောလဟလ ကြောင့် လူစုလူဝေး ဖြစ် | Freedom News Group
စစ်တွေ မှာ ကောလဟလ ကြောင့် လူစုလူဝေး ဖြစ်
by FNG on September 28, 2012	စည်သူဦး ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့က အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ် ကလေး ငယ် တစ်ဦး ဟာ ဘင်္ဂါလီတွေ
နေ ထိုင် တဲ့ အောင်မင်္ဂလာ ရပ် ကွက် ကို ရေခဲချောင်း သွား ရောင်း ရာ မှာ ပျောက်ဆုံး သွားတယ်၊
အသတ် ခံရတယ် ဆိုတဲ့ ကောလ ဟာလ တွေ ကြောင့် စစ်တွေ မြို့နေ ရခိုင် တိုင်း ရင်းသား
တွေ ဟာ အောင်မင်္ဂလာ ရပ် ကွက် တွင်း ၀င် ပြီး ကလေး ကို ရှာ ဖို့ စုရုံး ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
သံဃာတော်များ နှင့် ပြည်သူထောင်ပေါင်း များ စွာ စုရုံး ပြီး အခြေ အနေ တင်းမာ လာ နိုင် သော
ကြောင့် ရဲ ၊ စစ်တပ် စတဲ့ စစ်တွေ မြို့က လုံခြုံရေး တပ် ဖွဲ့ဝင် တွေ ဟာ အခြေအနေ ကို ထိမ်း
သိမ်း တဲ့ အနေ နဲ့အသင့် နေ ရာယူထား ကြပြီး ၊ ပျောက်ဆုံးသွား တယ် ဆိုတဲ့ ကလေး ငယ်
မောင်အောင်နိုင်ဦး ကို စုဝေး နေတဲ့ လူ အုပ် ကြီး ကို ပြ ခဲ့ တယ် လို့စစ်တွေ မြို့ က အင်တာနက်
ဆိုင် ပိုင်ရှင် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းသူ က FNG ကို ပြောပါတယ်။
” ပထမ တော့ လူစု မကွဲ သေးဘူး ပျောက် သွား တဲ့ ကလေး အစစ် မဟုတ် ဘူး ဆို ပြီး အိမ်မပြန်
ကြတာ ၊ ကလေး ကိုယ် တိုင်က ဒီနေ့အဲဒီ ရပ် ကွက် ထဲ ဈေးသွား မရောင်း ဘူး ပြောတယ် ” လို့
ကိုဝင်းသူ က ပြောပါတယ်။
ပျောက်ဆုံး သွား တဲ့ ကလေးငယ် ကို ပြည်သူ ရှေ့ပြန်လည် ပြသ မှု မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း တို့ပါ တက်ရောက် တယ် လို့သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ ပြီးခဲ့ တဲ့ မေလ နဲ့ဇွန်လ အတွင်း မငြိမ် သက် မှု တွေ ကြောင့် လူ ၈၀ ကျော်သေဆုံး
ပြီးထောင်ပေါင်း များ စွာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ် ပွား ခဲ့ ရပါတယ်။
ဓာတ် ပုံ များ ကို Kthan Tunoo ၏ Facebook မှ ရယူပါသည်။
From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ဆိုမာလီ သူပုန် တို့၏ နောက်ဆံး ခြေကုတ် စခန်း မြို့ တော် ကျဆုံး
၁၁၂ ကြိမ်မြောက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်လှည့် လည် အပူဇော်ခံပွဲ စည်ကားသိုက်မြိုက် စွာ ကျင်းပ →
Contact Us. info@freedomnewsgroup.com	Myanmar News in EnglishSoccer-Myanmar's fans riot after Southeast Asian Games knockoutUS blacklists Myanmar firms for NKorea arms tradeU.N. agency says Myanmar, Golden Triangle opium cultivation jumpsUN: Poverty pushing Myanmar opium output higherUS blacklists Myanmar firms for arms trade with N.KoreaMyanmar's MPs lack resourcesMyanmar's women boxers land blows for equalityMyanmar Emerges From the Shadows27 th Myanmar SEA Game Opening Ceremony Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,614,309 hits
10 Things You Need To Know Myanmar's Persecuted Muslim Minority huff.to/1cUUlSK via @HuffPostWorld 1 day ago
WATCH: Buffalo FLIPS Attacking Lion Into The Air huff.to/1cONUAn via @HuffPostGreen3days ago